8 qaab oo xarrago leh oo loogu talagalay naqshadeynta | Abuurista khadka tooska ah
Mararka qaarkood macaamiisha iyo magacyadooda waxay u baahan yihiin naqshado taabasho ah xarrago y kala soocid ka baxsan caadiga ah. Websaydhkan waa inaad ku isticmaashaa midabyo miyir leh, kuwa badanaa loogu yeero "xarrago" sida madow, cawl, bunni, ocher, haa, midabada kuwa kale ay ugu yeeri lahaayeen caajis, waan ogahay.
Maanta waxaan kuu keenayaa xirmo 8 qaab in aan ka helay DeviantArt oo si adag ugu hoggaansan dhammaan sharciyada naqshad miyir leh oo xarrago leh, laakiin iyada oo aan la iloobin taabashada casriga ah iyo ka mid ahaanshaha isbeddellada hadda socda. Iyaga dhexdooda waxaan ka helnaa jahwareer iyo taabasho xiran, farsamooyin aad u sarreeya oo iskudhaf ah oo silhouettes ubax ah iyo xitaa tolid, dhejiska iyo jilitaanka dhogorta.
Shaki la'aan waxay yihiin qaabab aad u qurux badan waana hubaa inay kuula imaan doonaan naqshadaha macaamiisha ugu baahida badan shirkadaha leh muuqaal dhaqameed iyo mid culus laakiin aan rabin inay joojiyaan joogitaanka safka hore.
Naqshadeeyaha ayaa naga codsanaya inaan soo xigano haddii aan isticmaalno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Maamulayaasha » 8 qaabab xarrago leh oo loogu talagalay naqshadeynta